China DL700 Halogen Mobile Operating Theatre Light miaraka amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy ny vidin'ny orinasa | Wanyu
DL700 Halogen Mobile Operating Theatre Light miaraka amin'ny vidin'ny orinasa
D700 Halogen fandidiana finday hazavana dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina.
DL700 dia manondro ny hazavana teôzôro miasa finday halogen.
Ity hazavana miasa amin'ny halogen finday ity dia misy fitaratra 3800. Izy io dia afaka manome hazavana hatramin'ny 16000, ary CRI avo mihoatra ny 96 sy mihoatra ny 4000K ny mari-pana loko. Fifantohana azo ovaina amin'ny tanana, 12-30cm, izay afaka mamaly ny filan'ny fandidiana hazondamosina miaraka amina tsindrona kely mankany amin'ny fandidiana fandoroana lehibe.
■ Ivotoerana mandratra
■ Efitra vonjy taitra
■ Toeram-pitsaboana mpitsabo biby
1. Reflector kalitao
Ny taratra dia vita amin'ny akora metaly tsy ferrous indray mandeha ary manana fitsaboana lalina manohitra ny okididida (tsy mifono) mba hahazoana antoka fa tsy hihombo sy hianjera mandritra ny fotoana maharitra
2. Rafitra fitantanana hafanana mahomby
Fonenana alimo-alimika dia mamela ny famafana hafanana mahomby, izay manala ny hafanana amin'ny lohan'ny mpandidy sy ny faritra maratra.
3. Fanazavana tsy miova sy maharitra
Ny rafitra taratry ny fitaratra maro dia mampihena ny fahaverezan'ny hazavan'ny hazavana ary mamokatra halalin'ny hazavana mihoatra ny 1400mm, izay afaka mahazo hazavana mitohy sy maharitra hatrany am-boalohany ka hatramin'ny lavaka fandidiana lalina indrindra.
4. takamoa OSRAM
Ny jiro dia mandray ny jiro OSRAM, 1000 ora ny androm-piainana.
5. Glass fitaratra fanafanana hafanana
Korea atsimo dia nanafatra vera fanamafisam-panafana hafanana ara-pitsaboana, mba tsy hiakatra mihoatra ny 10 degre ny fiakaran'ny maripana ary tsy hiteraka fitrandrahana rano any amin'ny faritra maratra
6. Antoka roa sosona
Miaraka amin'ny tondro goavam-be ary ny fidirana amin'ny jirika fanampiny, mba hiantohana tsara ny jiro lehibe sy ny biraon'ny mpanampy alohan'ny fandidiana
7. Rod Bent Mobile Base
Endrika kanto, mifanaraka amin'ny fitsipiky ny mekanika injeniera, ny toerana misy azy ary tsy mihetsika. Ny drafitra namboarina dia azo atao arakaraka ny halavan'ny dokotera
8. Rafitra miverina amin'ny bateria
Ny bateria dia manana tatitra momba ny fitiliana an-dranomasina sy an-tanety, izay azo antoka sy azo antoka. Famerana haingana sy fotoana fampiasana maharitra. Raha sendra tsy fahombiazan'ny herinaratra dia afaka manohana ny fampiasana ara-dalàna 4 ora izy io
DL700 Halogen Mobile Operating Theatre Light
> = 70cm
4500 ± 500
Fiainana fanompoana (h)
Previous: Halogen hopitaly DL620 NA fahazavana amin'ny Casters
Manaraka: LEDL100 LED finday malefaka fitiliana hazavana ho an'ny aretim-behivavy
LEDL730 LED AC / DC tsy misy alokaloka fandidiana Fro ...
DD620620 Valin-drihana ankapobeny taratra roa sandry Hos ...